Kutumira Mota Kubva kuKatar kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Isu tiri nyanzvi dzeindasitiri patinounza mota kuUK, saka pane kuyedza nzira iyi tega, tinokurudzira zvikuru kushandisa masevhisi edu kuita kuti hupenyu huve nyore kwazvo kwauri. Kana iwe uri kutumira mota kubva kuQatar ichienda kuUK, yakatsanangurwa pazasi ndiyo nzira yatinoteedzera kuti tikuise iwe munzira munzira ipfupi inogoneka yenguva.
Usati waendesa mota kubva kuQatar, mota inoda kunyoreswa uye unofanirwa kutora mahwendefa ekutumira kunze kubva kuRTA. Uku kuri nyore kutevedzera maitiro uye kunozokugonesa iwe kuti utore mota yako kuenda kuchikwata chedu muQatar iyo ichaigadzirira kutumira.
Mushure mekuuya kwemota yako kudepoti yedu, isu tinozozoisa mukati mayo mudziyo wekutakura nehanya kwazvo uye nekucherechedza. Vamiririri vedu vari pasi muQatar vakasarudzwa nekuda kweruzivo rwavo uye kutarisisa kune zvakadzama, saka zvicharamba zvichisunga mota yako kuti ive panzvimbo yerwendo rwayo.
Kana iwe ukashuvira kuenderera mberi nekuvimbiswa, isu tinopa sarudzo yekufamba inishuwarenzi iyo inovhara mota yako kusvika pakuzara kwayo kukosha kwese panguva yekufamba.
Paunenge uchipinza mota kubva kuQatar kuenda kuUK, unogona kuzviita zvachose mutero usingabhadharwi kana uchifanira kunge uine mota kwemwedzi mitanhatu uye wakagara kunze kweEU kwemwedzi inopfuura gumi nemiviri.
Kana izvi zvikasashanda zvino mota dzakavakwa muEU dzinoiswa pasi pe £ 50 basa uye 20% VAT, zvichibva pamari yawakabhadhara mota, neaya akavakwa kunze kweEU achiuya ne10% basa uye 20% VAT.
Kana iyo mota yauri kutumira kunze kweQatar uye kuUK ikave pamusoro pemakore makumi matatu, unogona kukodzera kudzikisira mwero wekunze mutero uye ingori 30% VAT zvichienderana nemamiriro ari kusangana.
Paunosvika kuUK, mota yako inozoiswa pasi pezviyero zvinoverengeka nekugadziridzwa kuitira kuti ive nechokwadi chekuti inosvika kuUK highway zviyero.
Kugadziriswa kuchasanganisira kugadzirisa mwenje yemwenje kuitira kuti ive neakarurama mapuranga maitiro ekushandisa kuUK pamwe nekushandura iyo yekumhanyisa mota kuratidza mamaira paawa uye nekuchinja mwenje wemhute kurudyi ruoko kana kuisa imwe kana isiri chinhu chakajairwa.
Mota dzinounzwa kubva kuQatar idzo dziri pasi pemakore gumi dzichazoda kuita bvunzo yeIVA iyo DVLA isati yabvumidza kunyoreswa. Seye chete kambani muUK ine IVA yekuyedza nzira yemotokari dzevapfuuri iyo inogamuchirwa neDVSA, iyo nguva yainotora kupedzisa ichi chinhu chekupinza chiri kukurumidza zvakanyanya sezvo mota yako isingatombofaniri kusiya saiti yedu.
Chiyedzo cheIVA hachidiwe pamotokari dzinopfuura makore gumi, zvisinei hazvo chinofanirwa kupasa MOT saka chinofanirwa kunge chakakodzera mumigwagwa maererano nekupfeka kwetayi, kumiswa uye mabhureki nezvimwe, izvo zvatinozotarisa, kuti tikwane fambiswa mumigwagwa yeUK.
Iyo yakarongedzwa, iri nyore maitiro akave akagadzirirwa pamusoro pemakore mazhinji, kutumira mota kubva kuQatar kuenda kuUK hakugone kuve nyore. Kuti umhanye pane zvaunoda uye uwane zvimwe, taura nesu nhasi pa +44 (0) 1332 81 0442.